भारतमा को’रोना सं’क्रमितकाे संख्या ह्वात्तै बढेपछि, मोदीले गरे यस्तो घोषणा, भारतभर ह’ल’चल « Online Tv Nepal
भारतमा को’रोना सं’क्रमितकाे संख्या ह्वात्तै बढेपछि, मोदीले गरे यस्तो घोषणा, भारतभर ह’ल’चल
Published :9March, 2020 9:06 am
कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलँदै गर्दा भारतले विशेष सावधानी अपनाउन शुरु गरेको छ । भारतले को’रोना भा’इरसका कारण राजधानी दिल्लीका सबै प्राथमिक स्कूलहरु एक महिनाका लागि बिदा गर्ने घोषणा गरेको छ । त्यस्तै सरकारी कार्यालयमा बायोमेट्रिक हाजिरीमा पनि रोक लगाइएको छ । युरोपियन युनियन र भारतका बीच हुनलागेको शिखरवार्ताका लागि तय भएको बेल्जियम यात्रा पनि स्थगित गरिएको घोषणा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले गरेका छन् । केन्द्रीय स्वास्थ्य मन्त्री डा. हर्षवर्धनले फेला परेका को’रोना सं’क्रमित सबै ३० जनालाई निगरानीमा राखिएको बिहीबार संसदमा जानकारी गराए ।
विश्वभर फैलँदै गएको को’रोना भाइ’रसको सं’क्रमणबाट ज्या’न गु’माउनेको संख्या ३ हजार ३ सय ८३ पुगेको छ । विश्वका ८४ देशमा फैलिएको को’रोनाको सं’क्रमणबाट ९७ हजार ८ सय ५२ जना सं’क्रमित रहेको समाचार संस्था सीएनएनले जनाएको छ । चीनको वुहान प्रान्तबाट फैलिएको को’रोनाका कारण चीनमा मात्रै ३ हजार ४२ जनाले ज्या’न गु’माएका छन् । चीनमा मात्रै सं’क्रमित हुनेको संख्या पनि सबैभन्दा धेरै अर्थात ८० हजार ५ सय ३२ छ ।
चीन बाहेकका १४ देशमा ३ सय ४१ जनाले ज्या’न गु’माएका छन् । बेलायतमा पनि एकजनाको को’रोनाकै का’रण ज्या’न गएको छ । को’रोना भा’इरसको स’ङ्क्रमण देखिएपछि उपचार गराइरहेकी एक ७० वर्षीया महिलाको ज्या’न गएको बेलायतका स्वास्थ्य अधिकारीहरुले पुष्टि गरेका छन् ।
गएको बुधबार को’रोनाको सङ्क्र’मण पाइएपछि ती महिला अस्पताल भर्ना भएकी थिइन् । रोयल बर्कशायर अस्पतालमा उपचार गराइरहेकी ती महिला बेलायतमै हुँदा स’ङ्क्रमित भएको बेलायतका प्रमुख चिकित्सा सल्लाहकार प्राध्यापक क्रिक व्हिट्टीले बताए । बेलायतमा को’रोना स’ङ्क्रमितको सङ्ख्या एक सय १६ पुगेको छ । पछिल्लो २४ घण्टामा ३० जनाभन्दा बढीमा स’ङ्क्रमण देखिएको हो ।
चीनपछि सबैभन्दा बढी ज्या’न गु’माउनेको संख्या इटालीमा पुगेको छ । को’रोनाकै संक्र’मणबाट इटालीमा अहिलेसम्म एक सय ४८ जनाले ज्या’न गु’माएका छन् । इटालीमा को’रोना सं’क्रमितको संख्या ३ हजार ८९ पुगेको छ । त्यस्तै इरानमा १ सय ७ जनाले ज्या’न गु’एमा छन् । इरानमा अहिले सम्म ३ हजार ५ सय १३ मा सं’क्रमण फैलिएको छ ।
यस्तै,विश्वव्यापी प्र’कोपको रुप लिएको को’रोना भा’इरसबारे विभिन्न देशले आफ्नै प्रकारका धारणा सार्वजनिक गरेका छन् । चीनबाट सुरू भएको यो भा’इरस पछिल्लो समय अन्य देशको टाउको दु:खाई बनेको छ । विभिन्न हल्ला र समाचारका प्रभावले नेपालमा मास्कको अभाव देखिएको छ भने संयुक्त राज्य अमेरीकाकी एक सं’क्रमण रोकथाम विशेषज्ञ डा. इली पेरेन्सभिचका अनुसार स’ङ्क्रमण नभएका व्यक्तिले मास्क लगाउँदा झनै जो’खिम भएको बताएकी छन् ।
पेरेन्सभिचका अनुसार स्वास्थ्य अवस्था सामान्य रहेका व्यक्तिहरुले मास्क लगाउन अनिवार्य नभएको बताएकी बताउँदै सामान्य स्वास्थ्य अवस्था रहेका व्यक्तिहरुले मास्कको प्रयोग गर्नु अझ जो’खिमयुक्त हुनसक्ने बताएकी छन् ।
फाेब्सका अनुसार उनी भन्छिन् ‘हालसम्म स्वस्थ व्यक्तिले मास्क लगाउँदैमा को’रोना भाई’रसको सं’क्रमणबाट जोगिन्छ भन्ने कुनै तत्थ्य प्रमाणित भएको छैन, तर मास्क प्रयोग गर्ने उपयुक्त तरीका नजान्दा अझ बढी जो’खिम’युक्त बन्नसक्छ।’ को’रोना भा’ईरस हावाको माध्यमबाट सर्ने भा’ईरस नभई सम्पर्कबाट सर्नेहुँदा मास्क लगायपछि पटक–पटक हातले अनुहारमा छोइने भएकाले को’रोना भा’ईरसको जो’खिम बढ्नसक्ने डा. पेरेन्सभिचको भनाई छ ।
नेपालमा भने को’रोना भा’ईरसबाट जोगिन सबैभन्दा सुरक्षित मानिने एन ९५ नामक मास्क त परैको कुरा बजारमा साधारण पेपर मास्कको समेत अभाव देखिन थालेको छ।